निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा लिङदेनको आपत्ति, विधान नसच्याउने अडान – Nepal Press
२०७८ माघ ९ गते ९:४५
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउन निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पार्टीको मुल सिद्धान्तबाट पछि हटेर विधान संशाेधन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।
आयोगले गत २ माघमा राप्रपालाई पत्राचार गर्दै एक हप्ताभित्र विधान संसोधन गरेर पठाउन भनेको छ । यस विषयमा आज पार्टीमा छलफल गरेर आयोगलाई जवाफ दिइने अध्यक्ष लिङ्देनले बताए ।
उनले नेपाल प्रेसलाई भने, ‘म उपत्यकाबाहिर थिएँ, हिजो आइपुगेँ । आजै पदाधिकारी वैठक बसेर यसको टुंगो लगाउँछौं ।’
आयोगले संविधानको मर्म र भावना विपरित पूर्वाग्रही ढंगले आयोगलाई पत्र पठाएको भन्दै उनले दुख व्यक्त गरे । नेपालको संविधानले गणतन्त्र र धर्मपनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय नमानेको लिङदेनले आयोगलाई स्मरण गराए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विपरितका र हिंसात्मक राजनीतिबाट सत्ता प्राप्त गर्ने एजेन्डाबाहेक सबै विषयवस्तु संविधानले खुल्ला राखेको छ । दुईतिहाई बहुमतले संसदबाटै राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउन सकिन्छ । हामी यही एजेन्डालाई लिएर राजनीति गरिरहेका छौं, चुनाव लडिरहेका छौं । हाम्रो विधान कसरी संविधानविपरित भयो ?’
विधान संसोधन गर्न दबाब दिएर आयोगले राप्रपामाथि पूर्वाग्रही र ज्यादतीपूर्ण व्यवहार गरेको लिङदेनले बताए ।
उनले थपे, ‘हामीले झण्डामा गाई राख्नु संविधानविपरित हुन्छ भने अर्को पार्टीले सुर्य राख्नु संविधानविपरित हुन्छ कि हुँदैन ? हाम्रो विधान योभन्दा अगाडि कसरी संविधानअनुकुल भयो र अहिले कसरी संविधानविपरित भयो भन्ने जवाफ हामी खोज्छौं ।’
राप्रपाले विधान सच्याउने प्रश्नै नआउने बताउँदै उनले भने, ‘विगतमा पनि यस्तै प्रकारले पत्र पठाउँदै आएको थियो । तर, हामीले सच्याएका थिएनौं । अहिले पनि सच्याउने कुनै आउँदैन ।’
आयोगको दिएको हदम्यादको पनि कुनै तुक नभएको लिङदेनले बताए । उनले भने, ‘यस्तो हदम्यादले केही अर्थ राख्दैन । तर, पनि हामी आज वैठक बसेर आयोगलाई जवाफ पठाउने छौं ।
प्रकाशित: २०७८ माघ ९ गते ९:४५
3 thoughts on “निर्वाचन आयोगको निर्देशनमा लिङदेनको आपत्ति, विधान नसच्याउने अडान”
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा राप्रपाले गाई इंगित झन्डा र राजसंस्था/हिन्दु अधिराज्यको मुद्दा लिएर निर्वाचन लड्दा संविधान विपरीत भएन तर आज आएर त्यही कुरा के कारणले संविधान विपरीत भयो? यो बीचमा संविधान त परिवर्तन भएको छैन होला। निर्वाचन आयोगले यसको जवाफ दिनैपर्छ।
प्रहलाद शाह says:
निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने र आफ्नो सिमा र परिधिभित्र रहने काम गरौं ! राजनीति मुद्दा र सवालमा राजनीति दलको मामलामा हस्तक्षेप गर्ने दुस्प्रयास निर्वाचन आयोगले नगरोस् ! हस्तक्षेपकारी भुमिकाले दुस्परिणाम हुन सक्छ ! सचेत रहनु !
Rajtanta Ra Hindu rastrya ko jun aawaz laye AAJA bulanda banunus hamro yha laye sath xa
लिङ्देनको निसानामा कमल थापाको गृहनगर
हेटौँडामा दीपक सिंहको ‘इन्ट्रि’ पछि असन्तुष्ट मधुले छाडे राप्रपा
एमाले र गठबन्धनको प्रतिस्पर्धामा राप्रपाका दिपक सिंहको आक्रामक इन्ट्री
राप्रपाको लिङ्देन एक्सप्रेस- गठबन्धन र एमालेको सवारीलाई ओभरटेक गर्दै
‘राप्रपाको राजधानी’ बाट लिङ्देनले भने- राष्ट्रिय राजनीतिको सन्तुलन अब फेरिन्छ
बचनमा बाँधिएका निधि, भक्तपुरमा राप्रपाको लागि भोट माग्ने
रुपन्देही राप्रपाका क्षेत्रीय अध्यक्ष खानसहित ६० जना एमालेमा प्रवेश
कांग्रेस परित्याग गरेर राप्रपाका उम्मेदवार बनेका आर्याललाई ज्यान मार्ने धम्की
महानगर र उपमहानगरका राप्रपा उम्मेदवारलाई राजेन्द्र लिङदेनले दिए यस्तो निर्देशन